Ihe ndị gara aga - Gaa Leta Hultsfred
2022-05-10	10 Mee	 - 2022-05-17	Nu
Mee 10 na elekere isii. - 13: 00	 ugboro ugboro
Nordic na-eje ije na Hultsfred
Ugwu kiosks	Storgatan 131, Hultsfred, Kalmar County
Anyị na-ezukọ na elu ochie krask Norra na 11.00 Ozi: Carin 070-304 57 22
Mee 10 na elekere isii. - 16: 00	 ugboro ugboro
Mee 10 na elekere isii. - 16: 30
Nnọọ na okirikiri akwụkwọ ọbá akwụkwọ isiokwu mmiri a bụ: “Baltics” Ruo Mee 10, anyị ga-agụọla “The Legionnaires” nke PO Engquist Ọnweghị ndebanye aha tupu achọrọ Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko kpọtụrụ
Mee 10 na elekere isii. - 19: 30
Abalị nwa agbọghọ
Ụlọ ọrụ teknụzụ mgbakwunye	Sågdammsvägen 3, Hultsfred, Kalmar
Mgbe ahụ, anyị na-agba abalị ọhụrụ ụmụ agbọghọ na Additivt Teknikcenter AB na Hultsfred. Ụmụ nwanyị nọ na ụlọ ọrụ ahụ ga-agwa gị otú njem ha si malite na ihe ha na-arụ ọrụ taa na ụlọ ọrụ ahụ! Olileanya
Mee 10 na elekere isii. - 20: 00
Mepee na Plọ Ahịa anụ ezi site na nkume ncheta
Hultsfred larịị	Östra Långgatan 4, Hultsfred
Lelee ihe ngosi banyere mmepe Hultsfred na mmepe Hultsfred n'efu. Alala ewetara gị kọfị. Na mmekota Studieförbundet Vuxenskolan
Mee 10 na elekere isii. - 23: 00
Na Na Na - Ndi India
Ndị ọbọgwụ vs ndị India
Mee 11 na elekere isii. - 12: 00
Gagharịa na nlele nke ahịhịa na Mimerparken
Carl-Johan, onye bụ onye isi oche otu ndị otu nchekwa ihe okike Emådalen na onye na-agụ akwụkwọ n'ọbá akwụkwọ Hultsfred, na-eduzi gị na Mimerparken wee gosi na-agwa gị gbasara ahịhịa ya. Mkpokọta na-ewere ọnọdụ n'ọbá akwụkwọ Hultsfred. Ndebanye aha tupu
Mee 11 na elekere isii. - 13: 00	 ugboro ugboro
Nri ehihie ero
Obodo maka mmadụ niile
Mee 11 na elekere isii. - 14: 30	 ugboro ugboro
Mee 11 na elekere isii. - 16: 30	 ugboro ugboro
Mee 11 na elekere isii. - 21: 00
Nzukọ ụgbọ ala vetiran soja na Lönneberga
Anyị na-amalite oge Veteranbilsträffar na Lönneberga na Lönnebergaboa na Wednesde 11 Mee na 18-20 Live egwu na ijere sanwichi, waffles, sausaji na achịcha na ihe ọṅụṅụ. Lọtrị na ihe ịtụnanya! Nnọọ!
Mee 12 na elekere isii. - 19: 30	 ugboro ugboro
Kọfị na okike
Virserum nke Konsthall	Kyrkogatan 36, Virserum, Kalmar County
Ịnweta izute dị mkpa na anyị na Virserums Konsthall kwenyere na mkpa ahụ nwere ike ịdị ukwuu ugbu a. Ọ bụ ya mere anyị ji malite kọfị na ihe okike. Otu Thursday n'ọnwa
Mee 12 na elekere isii. - 19: 00	 ugboro ugboro
Ikiri na ozi gbasara ihe ngosi Hultsfred Festival
Stefan na Swedish Rock Archive ntuziaka na-na ememme nzọụkwụ. A na-edebe ihe ngosi ahụ n'ime ụlọ "Klubben". Mkpokọta na ihe ngosi Swedish Rock Archive n'ime ụlọ akwụkwọ ahụ. Achọrọ ndebanye aha tupu. Ndebanye aha Stefan na 0495-240516
Mee 12 na elekere isii. - 20: 30
SK Lojal - Ọ BỤRỤ na Hebe
nnwere onwe	13
Mee 13 na elekere isii. - 17: 00	 ugboro ugboro
Mee 14 na elekere isii. - 13: 00
Aka nke abụọ / Loppis
Ekeberg Church nke abụọ na ahịa flea	Österlånggatan 6, Virserum, Kalmar County
Ịre ihe ochie, ngwá ụlọ, akwụkwọ, textiles, arịa ụlọ, curios, wdg.
Mee 14 na elekere isii. - 13: 00	 ugboro ugboro
Mee 14 na elekere isii. - 14: 00	 ugboro ugboro
Ihe ngosi nka Lundtorps Loge na Mörlunda
Berit Emstrand na-egosipụta eserese nka ọkachasị eserese mmiri agba. Ọ bụ akụkụ nke okirikiri nka nke Sun Coast. Mepee 10.00-16.00
Mee 14 na elekere isii. - 02: 00
Ogige egwuregwu Målilla	Atlantavägen, Målilla
N'ikpeazụ, ugbu a, anyị na-anya ụgbọ ala ọzọ! MÅLILLAS CYKELFEST Saturday 14 MAY NKE DỊbanye aha (SWISH ma ọ bụ BG ugwo) Ọ BỤGHỊ 7 APRIL Ajụjụ & Azịza: Gịnị bụ CYKELFEST ??? Anyị na-agba gburugburu Målilla na gburugburu ya
Mee 14 na elekere isii. - 23: 00
Ọ malitere na 2004, na na gburugburu Sandviken. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 18 ka e mesịrị - n'agbanyeghị ọtụtụ ọba iri kachasị elu - John Lindberg Trio na-akpọ onwe ya ... nkume '' '' n '' mpịakọta mpịakọta si n'ime ime obodo. Na satọde
Mee 15 na elekere isii. - 12: 00
Ọnụ ụzọ ugoloọma na-eje ije - ihe osise Hartvig na ụlọ ahịa agba
Artlọ Ahịa & Agba Hartvig	Lillgatan 4, Hultsfred, Kalmar County
Mee 15 na elekere isii. - 16: 00	 ugboro ugboro
Mee 15 na elekere isii. - 17: 00
Ụlọ parish Mörlunda	Präststigen 2, Mörlunda
Ngosipụta akwa ọhụrụ ụlọ parish Mörlunda Kenneth Rosen na Lena Carlsson na-egosi foto na ntụrụndụ. Anyị na-enye ofe na achicha. Ndebanye aha agaghị eme karịa Mee 6, ederede ma ọ bụ kpọọ Annika 070
Mee 15 na elekere isii. - 18: 00
Kafe na Vernisage na Maria Liberth, egwu Lars-Gunnar Jonsson
Mee 16 na elekere isii. - 11: 00	 ugboro ugboro
Mee 16 na elekere isii. - 12: 00	 ugboro ugboro
Mee 16 na elekere isii. - 11: 30	 ugboro ugboro
Nwa na akwukwo nso
Oge: Mọnde ọ bụla ọzọ na: 10.30-11.30 malite na February 7 Anyị na-ezute ndị enyi ọhụrụ nwere ọnọdụ dị iche iche, na-abụ abụ, na-aṅụ kọfị, na-ekwurịta ihe na-atọ ụtọ mgbe ị na-emefu ego.
Mee 16 na elekere isii. - 21: 00
Vultsby Ọ BỤRỤ C - Hultsfred FK
Mee 17 na elekere isii. - 12: 00	 ugboro ugboro
Mee 17 na elekere isii. - 13: 00	 ugboro ugboro